Barruu Wardii keessaa Dhangeessuu
Barruu dhangeessuu barbaaddu filadhu.
Amaloota barruu barbaachisoo Kabala Dhangeessuu irraa filadhu. Dhangii - Man'eelee irraas filachuu dandeessa. Qaaqni Man'eelee Dhangeessi kan amaloota barruu adda addaa keessaa fuula kabala Bocquu irraa filattu ni mul'ata.
Maadheelee lakkoofsota dhangeessuu barbaaddu qabatan filadhu.
Lakkoofsota dhangii maallaqaa durtiitiin ykn akka parsantiitti dhangeessuuf, sajoolee Kabala Dhangeessuu irraa fayyadami. Dhangiilee birootiif, Dhangii - Man'eelee filadhu. Dhangiiwwan jiran keessaa filachuu dandeessa ykn kan mataa keetii fuula caancala Lakkoofsa irratti qindeessuu dandeessa.
Handaarawwanii fi Duubeewwan Maadheelee fi Fuulotaaf Dhangeesssuu
Amaloota dhangeessuu wardii guutuu irratti raawwachuuf, Dhangii - Fuula filadhu. Irraantotaa fi jalaantota, fakkeenyaaf, fuula maxxansaman mara irratti kan mul'atu, qindeessuu dandeessa.
Fakkiin ati Dhangii - Fuula - Duubee dhaan feete fuula maxxansaa ykn durargii keessatti qofa mul'ata. Fakkii duubee argii irratti mul'isuuf, fakkii saxaatoo Saagi - Fakkii - Faayilii Irraa filachuudhaan saagiitii fakkii duubee filachuuf Dhangii - Qindeessi - Gara Duubee. Use the Navigator filachuudhaan fakkii maadheelee duubatti qindeessi.
Dirqaalaalee Dhangeessa Lakkoofsaa
Title is: Wardiilee Dhangeessuu